PaySketch: PayPal Analytics sy Tatitra | Martech Zone
PaySketch: PayPal Analytics sy ny Tatitra
Talata, Septambra 2, 2014 Talata, Septambra 2, 2014 Douglas Karr
Manana mpiara-miasa vitsivitsy aminay amin'ny indostria izay mampiasa PayPal amin'ny fifanakalozana rehetra. Ny vavahady fandefasana sy ny mpandoa vola dia manampy sarany kely amin'ny fifanakalozana, noho izany PayPal dia fomba tsotra sy atokisana hanangonana sarany amin'ny famandrihana, fampidinana ary fandoavam-bola hafa. Raha ny voalaza dia tsy ny interface interface PayPal no mora aleha - noho izany ny fahazoana fitaovam-pitsikilovana momba ny raharaham-barotra izay afaka manampy anao hanara-maso, hamakafaka, hanangona ary hifandray amin'ireo mpanjifanao dia afaka manome tombony lehibe ho anao.
Paysketch manome rindranasa birao fandefasana raharaham-barotra mora vidy izay manampy anao mitantana sy manara-maso ny orinasanao fa tsy ny interface PayPal izay tena manome ny fahitana ny fifanakalozana ihany. PaySketch dia manome fomba fijery ankapobeny ny kaontinao ary koa dashboard manokana ho an'ny fifanakalozana, varotra, fandoavam-bola, mpanjifa, vokatra ary fanaovana tatitra.
Misy tombony telo lehibe ho an'ny PaySketch:
Analytics - PaySketch dia manome PayPal Analytics tena izy miaraka amin'ny fomba fijery, vinavina ary famakafakana ny fironana hanampiana anao hanara-maso sy hanatsara ny orinasanao.
tatitra - Sivano, karohy, zahao ary sintomy avy hatrany ny fifanakalozana PayPal. Jereo sy ataovy ambany ny tatitra momba ny varotra, vokatra ary / na mpanjifa.
Account Management - Araho ny fifanakalozana, zahao ny fifandanjan'ny kaontinao, alefaso ny volanao ary andefaso vola.
Tags: mpanjifa paypaltabilao paypalfandoavana karamavokatra paypaltatitra momba ny paypaltatitra paypalvarotra paypalfifanakalozana paypalpayketch
7 Septambra 2014 à 3:13
Misaotra tamin'ny torohevitra Douglas. Toa tena ilaina sy mahaliana i Paysketch. Hanandrana aho.